ဝိတ်ပြားရှင် ဦးအောင်သိန်းလင်း ငြင်းချက်ထုတ်နေချိန်မှာ တရုတ်ဝက်ဘ်ဆိုက် တချို့မှာတော့ ပြောဆိုချက်တွေကို မျဉ်းကြောင်းတားပြီး အတည်ယူနေပါပြီ.. ~ ဒီမိုဝေယံ
ဝိတ်ပြားရှင် ဦးအောင်သိန်းလင်း ငြင်းချက်ထုတ်နေချိန်မှာ တရုတ်ဝက်ဘ်ဆိုက် တချို့မှာတော့ ပြောဆိုချက်တွေကို မျဉ်းကြောင်းတားပြီး အတည်ယူနေပါပြီ..
ညောင်မြစ်တူးတော့ ဖွတ်ဥပေါ်ဆိုသလို တရုတ်ဆိုဒ်တွေမှာတော့ ဝိတ်ပြားရှင် ဦးအောင်သိန်းလင်း ပြောတဲ့ အင်တာဗျူးထဲက အချက်တွေ မျဉ်းတားပြီး ဖော်ပြနေကြပါပြီ.. နားလည်တဲ့သူတွေ မျဉ်းတားထားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ဘာသာပြန် ပေးကြပါ..။ ဒီလင့်ခ်မှာ အပြည့်အစုံ သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်..။
ဘာသာပြန်တာ မှားလို့ပါဆိုပြီး ဝိတ်ပြားရှင် ဦးအောင်သိန်းလင်း ငြင်းချက်ထုတ်နေချိန်မှာ တရုတ်ဝက်ဆိုက် တွေကတော့ ပြောပြီးစလစ် နံပါတ်တစ် ထွက်ပြီးသား ဆင်စွယ် ပြန်ဝင်ယိုး မရှိ ဘွားတေးမပါ ဆိုပြီး အတည်ယူနေပြီလားပဲ..
ဝိတ်ပြားရှင်နဲ့ အမေးအဖြေ ဒီလင့်ခ်ရဲ့ http://bbs.my0511.com/f152b-t3924362z-1 အထက်က ဒုတိယပုံမှာ လိုင်းတားထားတဲ့ အထဲက အချက်များအား Google Translate နဲ့ ဘာသာပြန်လိုက်တယ်..။
Myitsone dam must continue to build "
是的，这是他一个人的主意，不是国会决议。我们对此有反对意见。他试图隔断中缅的联系。သမ္မတရဲ့ တဦးတည်း ဆုံးဖြတ်ချက်ပါတဲ့ ပါလီမာန်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်မဟုတ်ပါ..။ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရှုံချပါတယ်.တဲ့
Yes, this is his idea ofaperson, notacongressional resolution. We have opposing views. He tried to cut
မြစ်ဆုံဆည် ပြန်စဖို့ ဖြစ်နိုင်ပါလားဆိုတော့
Do you think the dam is possible to continue the construction of it?
တရုတ်ပြည်သူတွေနဲ့ အင်မတန် ရင်းနှီးချစ်ခင်ပါတယ်..။ ကျွန်တော်တို့ ဒုက္ခရောက်နေချိန်မှာ တရုတ်ပြည်သူတွေက ကူညီခဲ့ကြတာပါ..
We Chinese people are very friendly. When we are distressed, the Chinese people to help us.
ဒါကတော့ ယခုတင်ထားတဲ့ ပုံက လိုင်းတားထားတာတွေကို Google Translate ဘာသာပြန်လိုက်ပါတယ်..။ ဒီတော့ ဒီသတင်းကို တရုတ် ဝက်ဆိုဒ်တွေက အတည်ယူပြီး မျဉ်းကြောင်းတွေတား ဖော်ပြနေသလားပဲ..။
ဓာတ်ပုံအား မျဉ်းကြောင်းတား ဖော်ပြတဲ့ လင့်ခ် http://bbs.my0511.com/f152b-t3924362z-1 မှာ မျဉ်းကြောင်း တားထားတာတွေ ဆက်လက်ဘာသာပြန်ပေး ကြပါ..။
[ 本帖最后由 山水清音 于 12-7-6 13:32 编辑 ]
တရုတ် နိုင်ငံထုတ် Southern Weekend သတင်းစာနဲ့ အင်တာဗျူး၌ အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံရိုက်ခံနေစဉ်